भारतले फेरी नेपाललाई नाकाबन्दी गर्‍यो, अब के हुन्छ?? | Pabitra TV
भारतले फेरी नेपाललाई नाकाबन्दी गर्‍यो, अब के हुन्छ??
मंगलवार २६ कार्तिक, २०७६
भारतले नेपाललाई फेरि नाकाबन्दी गर्न शुरु गरेको छ। नेपाल लाई भारतले नाकाबन्दी गरेको यो पहिलो भने हैन। २०७२ सालको नेपालको दोस्रो ठुलो भुकम्पको बेलामा छिमेकी देशलाई सहयोग गर्नको साटो नाकाबन्दी गरेर आफ्नो ब्याहोरा देखाएको तितो सत्य आम नेपालीहरुले बिर्सेंका छैनन।
Tags: नाकाबन्दी, नेपाल भारत नाकाबन्दी, भारतिय नाकाबन्दी
मोदी ले आफ्नो देश बचाइदिने नेपाली हरुलाई देश निकाला गर्ने पक्का
सेन्सर सहितको तास काठमाण्डौ भित्रियो, जुवाडे रातारात करोड्पति। हेर्नुहोस् भिडियो सहित्